Nadiifinta aad iPhone majorly ku xiran tahay sida aad u ogaado isticmaalka xusuusta iyo sida hufan qalab cudur-aad isticmaalayso waa. Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah qalabka baadhista iyo ayna ku ool ah oo kaa caawin kara inaad sii hagaajiso waxqabadka aad iPhone fudayd.
app nadiifinta iPhone No 1: Xasuusta & Disk Scanner Pro
Soo diyaariyay Phan Minh Nhut , Memory & Disk Scanner shuqullada Pro si toos ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad yahay, rakibi app ku saabsan iPhone oo u daaya socda. Memory & Disk Scanner Pro si toos ah uu baaritaanku iyo tirtirtaa faylasha junk aan la rabin oo siidaysay ilaa xasuusta telefoonka ee si aad uga bogato user mug leh.
Ee xasuusta iyo kaydinta baaritaano si toos ah markii app waxay ka bilaabantaa, oo Fayda files rabin iyo junk.
Calan qiimaha ugu yar ee lacagta ah ee RAM oo ha Memory & Disk Scanner meel Pro lacag la'aan ah ilaa uu sheegay in si toos ah.
Calan qiimaha ugu badan ee lacagta ah ee RAM oo ha app ah oo lacag la'aan ah ilaa meel ku sheegay in si toos ah.
Goobaha ugu yar iyo badnaan oo bilaash ah RAM ah.
Memory & Disk Scanner Pro ma aha lacag la'aan.
app nadiifinta iPhone No 2: Xaaladda Memory
Xaaladda Xasuusta, weli app kale nadiifinta iPhone ee ay Kanako Homma kuu ogolaanayaa inaad si ay ula socdaan xaaladda xusuusta aad telefoon. Interfaces sida Memory iyo shaqeyta in app ku soo bandhigaan macluumaadka ku saabsan xasuusta loo isticmaalo iyo geedi socodka user-bilaabay in ay yihiin socda ee asalka ah, halka Nadiifinta interface kuu ogolaanaya in aad si aad u nadiifiso xusuusta iyo joojiyo geedi orodka la rabin in ay hagaajiso waxqabadka telefoonka ee.
Hal-tuubada si aad u hesho dhammaan macluumaadka ku saabsan isticmaalka xasuusta.
Hal-tuubada si aad u hesho dhammaan macluumaadka ku saabsan geedi socodka maamulka.
Hal-tuubada si uu u joojiyo geedi socda.
Hal-tuubada ayna iPhone.
Mararka qaarkood Status Memory gabagabeynayo laftiisa halka dilka hababka maamulka.
app nadiifinta iPhone No 3: Maareeyaha SYS Activity
Wax soo saarka A by Appsware , Manager SYS Waxqabadka kuu ogolaanayaa inaad si ay ula socdaan dhammaan macluumaadka nidaamka sida isticmaalka xasuusta, isticmaalka RAM, iwm gudahood interface user-friendly ah oo aad la siiyaa talooyin ku habboon si ay u qabtaan hawlo ayna aad iPhone.
Ogeysiin ku saabsan geedi socodka asalka iyo barnaamijyadooda.
Waxaa fiiriyaan LTE, 3G, oo Wi-Fi xawaaraha shabakada.
Garaafka xaaladda iPhone.
Nidaamka Buuxi socodka.
Waxaa loo baahan faragelinta Buuggan in ay tayadoodii iPhone.
app nadiifinta iPhone No 4: IAssistant
App A free by Life On Touch , IAssistant gelineya inaad si ay ula socdaan xasuusta, processor, diinta iyo batari aad iPhone. Interface fudud in la isticmaalo kuu ogolaanaya in aad si aad u hubiso caafimaadka nidaamka ku salaysan isticmaalka khayraadka aad iPhone.
Jeegaga nidaamka caafimaadka.
Waxaa fiiriyaan isticmaalka batteriga.
Waxaa fiiriyaan DHCP.
Awood u ah ee la socoshada caafimaadka guud ee aad iPhone.
Miyuu user-friendly interface.
La jaan qaada dhamaan qalabka macruufka.
Faragelinta Buugga waxaa loo baahan yahay nadiifinta iPhone.
app nadiifinta iPhone No 5: bytes (Memory)
Wax soo saarka ka mid ah dhicii Apps LLC , bytes (Memory) waa ka duwan tartanka kale. Si ka duwan dadka kale, bytes xisaabinaya iyo bandhigayaa qadarka xasuusta isticmaali karo. Iyada oo macluumaad sida, waxaad si fudud u xisaabi kartaa iyo joojiso habka loo baahnayn oo socda Chine si loo hagaajiyo wax-qabadka qalabka Apple.
Shaxda DAARAN geedi socodka kuu ogolaanayaa inaad si ay u arkaan tirada geedi socodka socda in aad joojiso karaa sida laguugu sahlo.
Xisaabinaya caddadka lacag la'aan xusuusta, oo aad ugu suurtogasho inay u qiimeeyaan wax qabadka guud.
Xisaabinaya iyo qaab sida badan xusuusta waa la heli karaa.
Bandhigay geedi socodka socda ee interface user-friendly ah.
Waxaa loo baahan yahay ka-qabashada Buugga in nadiifinta xasuusta.
app nadiifinta iPhone No 6: Battery Doctor
Soo diyaariyay KS Mobile, Inc. , Battery Doctor la oran karo waa mid ka mid dukaan-stop aad u baahantahay oo ayna iPhone oo dhan ah. App wuxuu xisaabiyaa cadadka baabba'saday, RAM iyo kaydinta iyo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad nadiifisid qalab aad si sahlan.
Bandhigay xaaladda nidaamka caafimaadka guud oo ku saabsan interface ugu weyn.
Awood aad u nadiifiso files junk.
Awood aad si kor loogu qaado xusuusta aad telefoonka ee.
Interface dareen leh.
Free si ay u isticmaalaan.
Ayna phone Easy.
Waqtiga qoraalkan, Battery Doctor lama jaanqaadi macruufka 8.0.3 iyo wixii ka sareeya.
app nadiifinta iPhone No 7: Expander Phone
Weli nadiifsan kale phone in aad u ogolaanaya in ay qayb weyn-saar barnaamijyadooda ku rakiban, ka saar nidaamka khasnado, iyo baab'iyo sawiradiisii ​​ka dib markii si toos ah iyaga taageerto ilaa aad PC. Interface user-friendly ah Expander Phone u baahan yahay tababar xirfadeed ama aqoon farsamo ka hor ma.
Easy nidaamka khasnado saarista.
Image dib ka hor ka saarida Automatic.
App saarista Jumlada.
Samaynaya hawlaha kala duwan.
Kuu ogolaanayaa ayna iPhone fudud.
Expander Phone weli waa wajiga beta waqtiga qoraalkan.
app nadiifinta iPhone No 8: Wondershare SafeEraser
Qalab wax ku ool ah ee ay soo Wondershare , SafeEraser nadiifin oo aan keliya ka iPhone habboon laakiin waxa ay sidoo kale kuu ogolaanaya in aad si joogto ah masixi xogta shakhsiga aad ka telefoonka oo aad u waa irrecoverable aad waligaa doonayaan u Wakiil ah qalab aad off.
Daahiriyo files junk.
Bixisaa barnaamijyadooda la isticmaalin.
Qaniinaa sawiro si loo badbaadiyo meel lagu kaydiyo.
Ka dhig files tirtiray irrecoverable.
Dhammaan muuqaalada laga gali karo interface hal.
La socon kara labada Windows iyo dhufto ee Mac.
Wondershare SafeEraser waa app lacag.
app nadiifinta iPhone No 9: Xasuusta 100% Pro
Xasuusta 100% Pro by Cocopok waa aalad ayna iPhone in kormeera, nadiifin, iyo optimizes xusuusta aad telefoonka ee in ay kordhiso qaab guud. Inkastoo app wuxuu la iman doonaa qiimihiisa ah, waxaa haboon boqolkiiba kasta oo aad maal waxa ku jira.
Waxaa fiiriyaan habka aad iPhone.
Muujiya Caddaynay xaaladda xasuusta.
Kuu ogolaanaya in aad si aad u nadiifiso xusuusta iyo tayadoodii aad iPhone si fudud.
Waxay bixisaa macluumaad dhamaystiran nidaamka.
Xasuusta 100% Pro waa app lacag.
app nadiifinta iPhone No 10: Xasuusta Doctor
Xasuusta Doctor, app ay bixiyaan Blue basasha jilicsan, Inc. , wuxuu kuu ogolaanayaa in uu soo bandhigo iyo maarayn xusuusta aad iPhone si hufan. Isticmaalaa dalal badan oo caalamka ah, app waa la yaab leh oo faa'iido leh marka ay timaado fiican oo aad telefoonka.
Bandhigay xaaladda xasuusta Free, Wax qabad la'aan, iyo Active.
Muujiya socda geedi socodka.
Muujiya socda Chine.
Interface Easy iyo user-friendly.
Waxaa fiiriyaan aad iPhone gabi ahaanba.
Bandhigay xaaladda xasuusta hab sahlan loo fahmi.
Xasuusta Doctor waa app lacag.
Inkastoo qaar ka mid ah barnaamijyadooda ku xusan wada hadlay waxaa la bixiyaa, kuwa lacag la'aan ah ayaa weli ku ool ah. Qiimaha barnaamijyadooda ku xiran tahay gobolka, nooca kooxda, iyo kharashka wax soo saarka ah ee barnaamijka ka.
> Resource > Clean-up > 10 Waa-Have iPhone Nadiifinta Apps